‘तिम्रै लागि अनामिका’ माथि एक दृष्टि,Literature Review(साहित्यक-समालोचना) , WRITING NEPAL — Books, Writings, Authors, Publisher, Writers and Blogger - All in One Place. — Just Write !
Home > Literature Review(साहित्यक-समालोचना) > ‘तिम्रै लागि अनामिका’ माथि एक दृष्टि
‘तिम्रै लागि अनामिका’ माथि एक दृष्टि
Rated 2.82/5 (From 327 user)
Niraj Bhatta 3rd Nov 2014 Literature Review(साहित्यक-समालोचना)0comments Like ( 0) 2761 reads
हामी दुवै मिली नयाँ सरकार बनाऔँ
हेर्दै जाऊँ राम्रै भए घरबार बनाऔँ ।
दुश्मनको गिद्धे दृष्टि पर्नेछ हामीमाथि
घन घोटेर धारिलो तरबार बनाऔँ ।
कलाप्रति सर्जकको लगाव प्रेममा रुपान्तरित हुन थालेपछि साधनाबाटै जीवन–ऊर्जा प्राप्त हुन्छ, अनि त्यही भावभूमिमा सिर्जनाको मूल फुटेर जन्मन्छ, ‘तिम्रै लागि अनामिका’ ।
माथिका शेरहरु जोशिला युवा गजलकार निरज भट्टले वाचन गर्दै गर्दा जिल्ला विकास समितिको हल वाह–वाहले गुञ्जायमान भएको थियो । गजलमञ्च चितवनको साथ अनि गजलकार तथा गीतकार राजेन्द्र थापा तथा कुशल नेता विजय सुवेदीको हातले विमोचित गजलसंग्रह
‘तिम्रै लागि अनामिका’ बन्दका बाबजुद पनि धेरै गजलप्रेमी मनहरुको शानदार उपस्थितिले भव्यताका साथ सम्पन्न भएको देखियो ।
गजल सिर्जनाको हिसाबले अत्यन्तै उर्भर भूमि गजलको राजधानी चितवनमा अर्का एक नवोदित गजलकार निरज भट्ट आफ्नो पहिलो गजलसंग्रह ‘तिम्रै लागि अनामिका’ को साथमा पदार्पण गरेका छन् । एक दशक लामो विद्यार्थी राजनीतिमा कुशल विद्यार्थी नेताका रुपमा परिचित भट्ट यतिबेला त्यति नै लोकप्रियताका साथ बहुतै ओझिलो रुपमा गजलको विराट आकाशमा प्रवेश गरेका छन् । अझ यसो भनौँ, सडकमा मसाल बोकेर देश र जनताका निम्ति आवाज उठाउने मान्छे आज काव्यिक चेतना बोकेर अक्षरहरुबाट ब्यँुझाउन खोजिरहेको छ । वास्तवमा म एउटा पाठकका हिसाबले गजलसंग्रह पढिसकेपछि ममा यसले पारेको गहिरो प्रभावप्रति केही कुरा लेख्न वाञ्छनीय महसुस भएका कारणले कलमका पदचापहरुलाई गति दिन चाहन्छु ।
जम्माजम्मी १११ वटा गजलहरु संग्रहित गरिएको यस गजलसंग्रहमार्फत गजलकार भट्टले सामाजिक चेतनाको चिराग उठाउँदै आफूलाई त्यसको अभियन्ताका रुपमा स्थापित गर्न खोजेका छन् । अनेक आयामहरुबाट निर्देशित हुँदै सिर्जना गरिएका गजलका शेरहरुले मानवमन र मस्तिष्कलाई सहज स्पर्श गरेको अनुभूति यसको अध्ययनले दिलाउँछ ।
हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न भन्यौ तिमीले
आगोमाथि खाली खुट्टा टेक्न भन्यौ तिमीले ।
भनेँ मैले कति रात निद्रा छैन परेकै
त्यही आँखाको आँसुले सेक्न भन्यौ तिमीले ।
बडो सरल भाषामा गम्भीर भावको अभिव्यक्ति भट्टका गजलको मूलभूत विशेषता हो । प्रेम र वियोगमा तड्पिरहेका आमयुवाहरुको दिलभित्रका दरारहरुलाई अक्षरका माध्यमबाट मूर्तता प्रदान गर्ने काम चानचुने काम हुँदै होइन । प्रेमका सफलता, असफलता अनि भोगाइहरुको प्रस्ट दर्पण यिनका गजलभित्र पाइने भाव हो । हार्दिक अनि शालीन प्रेमका पक्षपाती भट्ट युग सचेतता अनि प्रेमभित्रको अनुशासनलाई आफ्ना गजलका शेरहरुमार्फत मुखरित गर्ने गजलकार हुन् ।
आजभोलि सधैँभरि अस्पताल जान्छु
बिरामी नै भएसरी अस्पताल जान्छु ।
कसैले यो मेरो मुटु जाँच्न लगेको छ
साक्षी बस्ने निहुँ गरी अस्पताल जान्छु ।
कडा अक्षर संरचनाले बाँधिएका यस गजलसंग्रहका गजलहरुको अध्ययन गर्न पाठकको दिलमा पनि विभिन्न खाले अनुमान वा शङ्काहरुको लाम लगाइदिएको छ । हरेक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा वा परिस्थितिजन्य बाध्यतामा पनि आशावादी स्वरको मसिनो रेसा यिनका गजलको एक खाले विशेषता हो । निश्चल मायाको अभ्यास गर्दागर्दै पटकपटक अस्पताल पुगेका गजलकार आफ्नो आत्मिक प्रेमप्रति जति सचेत छन्– राष्ट्रिय गौरव, स्वाभिमान र अस्मितासँग पनि त्यति नै संवेदनशील छन् ।
म नेपाल बाँच्दा मात्रै जीवित भएको हुन्छु
कालापानी सुस्ता रूँदा पीडित भएको हुन्छु ।
वीरहरुको वीरता अटल यो स्वाभिमान
जीवन्त राख्ने स्वार्थमै निहित भएको हुन्छु ।
आफ्नो माटोप्रतिको अगाध आस्था अनि राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत गजलका शेरहरु पढ्दा लाग्छ, गजलकारको राष्ट्रिय अस्मिताप्रतिको अटल आस्था आफ्नी मायालुप्रतिको आशक्तिभन्दा कम छैन । पहिलो कृतिमार्फत निकै रसिला, रोमान्टिक अनि आजको समयका हिस्साहरुको दुरूस्त चित्रणले गजलसंग्रहलाई नै जीवन्त बनाउने प्रयास गरेको छ । अनि गजलकार निरज भट्टको ल्याकतलाई पनि सबै साहित्यप्रेमी भावकहरुका बीचमा परिचित बनाइदिएको छ ।
माफ गर तिम्रो यादमा पिएँ हल्काहल्का
तिम्रो उपहार सम्झिएर लिएँ हल्काहल्का ।
आज पो धन भेट्यौ मलाई छोडिदियौ
हिजोसम्म तिम्रो दिलमा थिएँ हल्काहल्का ।
गजलकार विज्ञान विषयको अध्यता भए पनि उनको साहित्यप्रतिको उत्कण्ठा सराहनीय छ । विज्ञान मस्तिष्कको वस्तु हो भने साहित्य हृदयको वस्तु हो । जब प्रणयभावको प्राकृतिक रागले दिललाई स्पर्श गर्छ अनि कोमल भाव र हार्दिक कल्पनाको सिर्जना भएर जन्मन्छन्, गजलका शेरहरु । प्रेम र वियोगमा तड्पिएर शराबी प्यालामा रम्ने युवा जमातलाई सम्बोधन गर्दै बडो शालीन हिसाबले गजलका शेरहरु पस्कने निरजले यस संग्रहमार्फत भट्टीभित्रका पीडा, व्यथा, आर्तनाद अनि उन्मादहरुलाई समेत परिचितझैँ गरी व्यक्त गरेका छन् ।
यो शहरमा बोक्सीहरु नै धामी छन् र पो म पागल छु
सज्जन मानिएका झनै हरामी छन् र पो म पागल छु ।
हुनेलाइ सधैँ पुगिसरी आयो, नहुने सधैँ रोएको रोयै
देवता आफैँ पनि त छलछामी छन् र पो म पागल छु ।
गजलका शेरहरु कति हृदयस्पर्शी छन् र कति तीता यथार्थहरु ओकलिरहेका छन् ! लाग्छ, निकै लामो साधना अनि विराट चेतनाको प्रस्फुटनबाट मात्र यो सम्भव भएको हो । आजको समाज औपचारिक र कृत्रिम दायराभित्र कैद भइरहेको परिवेशमा मान्छेका बनावटी र देखावटी प्रवृत्तिप्रति धारिलो प्रहारले काव्यिक निखारता प्रदान गरेको छ । यस्तै–यस्तै समाज परिवेशभित्र निसास्सिएर व्यतीत गरिरहेका समस्याहरु अनि भोगाइहरुको सजीव चित्रण यस संग्रहमा भेट्न सकिन्छ ।
गजलकार मूलतः राजनीतिक र साहित्यिक चेतनाका दोभान हुन् । नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिपाटी र व्यवहारले चिन्तित गजलकार आशाको त्यान्द्रोमा झुन्डिएर बाँचेका तमाम नेपाली जनताका प्रतिनिधि पात्र बनेका छन् ।
प्रणय र प्रणयइतर दुवै खाले गजलहरु समावेश गरेर गजलको उर्वर भूमि चितवनबाट आफ्नो यात्राको प्रार्दुभाव गर्ने निरज भट्टमा एउटा युवा सोच र चिन्तनले सिर्जनाका डोबहरु निर्माण गर्दै अक्षरहरुमा रम्न सक्ने तागत देखेरै होला नेपाली गजल–आकाशका मूर्धन्य श्रष्टा बुँद रानाको यस्तो अभिव्यक्ति आएको ,
कुनै राता कुनै सेता कुनै गाढा कुनै फिका
फुलेका छन् फूलहरु नमुना हुन् जिन्दगीका ।
सुन दिए नाक, कान दुखाउँला भनी होला
फूल दिए निरजले ‘तिम्रै लागि अनामिका’ ।
जे होस्, अनामिकालाई हाम्रो पनि शुभकामना । निरन्तरको साधनाले नै मानिसलाई
अझ शक्तिशाली बनाउँछ । त्यस्तै, आफ्नो पहिलो गजलसंग्रहबाट नै वाह–वाह कमाएका गजलकारले पाठकहरुमा उठेको जिज्ञासा अनि साहित्यिक तिर्खा मेटाउन आगामी दिनहरुमा पनि अनवरत लागिरहून् र आफ्ना कमीकमजोरीहरुलाई सच्चाउँदै
यस्तै सशक्त कीर्तिहरु जन्माउन सफल रहून् भनी हार्दिक शुभकामना।